Sochie Youtube vidiyo gị | Martech Zone
Otutu ndi mmadu amataghi ya, mana Youtube nwere ụfọdụ isi nchịkọta n'ihi na ị soro gị videos. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ onye na-etinye ha na egwuregwu ole ha nwetara, ọ dị mfe iji Youtube Nghọta ngwaọrụ.
Nke mbụ, banye na Akaụntụ Youtube gị wee họrọ otu vidiyo gị. You'll ga-achọpụta ihe Nghọta bọtịnụ dị n'akụkụ aka nri:
Ọzọ, họrọ nchọpụta ma ị ga-ahụ menu nhọrọ:
họrọ Agbakwunyere Player ma ị ga-ezute na ndepụta nke saịtị niile vidiyo ahụ agbakwunyere na ole elele ọ natara ebe ahụ:
Nke a bụ nnukwu ngwaọrụ maka ahịa! Ọ bụrụ na saịtị were otu vidiyo vidio gị, nke a bụ ụzọ dị mma iji nyochaa ọ bụghị naanị saịtị ndị nwere mmasị - mana saịtị ndị na-ebu ntakịrị okporo ụzọ. I nwekwara ike ibudata ọnụ ọgụgụ ndị a site na faịlụ CSV.
Tags: youtubenyocha youtubeahia ahia youtubemetric youtubeyoutube na-esochi
Jul 14, 2009 na 3: 35 AM
Nke ahụ dị mma, m ga-agbakwunye nsuso mgbe m malitere biputere na youtube.